wasiirka arrimaha dibadda ee DFS oo….. |
wasiirka arrimaha dibadda ee DFS oo…..
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabisalaad Hadliye Cumar ayaa la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska. Isagoo uga warbixiyay xaaladda waddanka ka jirta.
Hadal uu u jeediyay jaaliyadda ayuu wasiirku kula dardaarmay dadka Soomalida ah inay iska ilaaliyaan dadka siyaasiyiinta ah ee doonaya inay kala fogeeyaan bulshada isla markaana khilaaf dhexdooda dhigaan dadka.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay dadaallada dowlad-dhisidda ee ay waddo xukuumadda, ayadoo maamulka lagu baahinayo waddanka, isla markaana kooxaha argagixisada ah laga saarayo goobaha ay dalka uga sugan yihiin si dadku ay nabad u helaan.
“Dagaalka lala dagaalamayo argagixisadu wuu soo dhammaan rabaa, dhibaatadu waa soo yaraaneysaa, argagixisada aan la dagaallamayno milatari uun loogama badin karo, waa in dhaqaale la sameeyo, oo dadku midoobaan” ayuu yiri wasiir Hadliye oo ugu baaqay dhallinyarada ay khaldayaan kooxahani inay ka soo laabtaan.
Ugu dambeyntii Wasiirka arrimaha dibadda ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay maalgashadaan dalkooda, oo laga faa’iidaysto kheyraadka dalku leeyahay sida beeraha, xoolaha iyo kalluunkaba.
“Ma doonayno in mucaawino uun nala siiyo, caalamka waqti badan ayay na soo kaalmeeyeen waana u mahad celinaynaa, waxaanse u baahannahay inaan wax qabsano oo aan maalgashano waddankeena” ayuu yiri wasiir Hadliye.